Weeraryahanka Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa Sheegay in uu Sariirta Jiifay Muddo 12 Saacadood ah, Isagoo Dareensan in uu Dhaawac Jilibka ka soo Gaaray | Ciyaarside.com
Weeraryahanka Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa Sheegay in uu Sariirta Jiifay Muddo 12 Saacadood ah, Isagoo Dareensan in uu Dhaawac Jilibka ka soo Gaaray
Nov 16, 2017 - Aragtiyood
Weeraryahanka kooxda Man United ee Zlatan Ibrahimovic ayaa soo jeediyay in uu boos kale uga ciyaari doono kooxdiisa Man United marka uu ka soo laabto dhaawaca muddada dheer ah.
36 jirkan ayaa dhaawac tan iyo bishii April kadib markii uu dhaawac culus ka soo gaaray jilibka dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore isaga oo wakhtigaas ahaa gool dhaliyaha man United.
Si kasta ha ahaatee weeraryahanka Number-kiisii.9 aad ayaa la labixiyey oo la siiyey Romelu Lukaku waxana isaga farata laga saaray namberkii 10 aad ee rooney ,
Laakiin waxa uu mar walba isku arkaa xiddig haybad u leh ka ciyaarista namberka.10 aad waxana uu ka soo baxaa Weerarka si uu kubada u dhisan.
“Aniga ahaan 10aad waa namber kayga waa midka sameeya kala duwanaanshaha oo marwalba la dareemo, waa midka kulamada guusha kooxdiisa gaarsiiya, waana hogaamiyaha waxana aan isku arkaa booskaas, laakiin maaha wax la iska kaa siiyay, waa wax aad u dhalatay”ayuu u sheegay video for Volvo.
“Hadii aan runta ka hadlo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dhaawaca ka soo laabto, Waayo waxa namber.10 u xirtay Xulka qarankayga iyo PSG waanan u xiran lahaa Inter Milan laakiin waxa aan si deg-deg ah ugu biiray Barcelona”.
“Waxa aan doonayay in aan isla numberka 10 u xirto Ac Milan laaiin waxa aan qaatay Number kale aniga oo qadarin u hayay xiddigii markaas watay,maan xiran Ajax waxa aan dareemayaa No.10 waxana aan u taaganahay No.10, waxa lagu qori doonaa taariikhda in aan mar kasta xiran jiray”.
Wararka ayaa sheegaya in uu Ibrahimovic diyaar u noqon doon kulanka sabtida ee ay United garoonkeeda Old Trafford ku soo dhawayn doonto Newcastle United.